ဤစာရင်းအင်းများသည်မိုဘိုင်းစျေးကွက်အပေါ်သင်၏အမြင်ကိုအကျိုးသက်ရောက်သင့်သည် Martech Zone
တနင်္ဂနွေ, နိုဝင်ဘာလ 8, 2015 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
နောက်ဆုံးပေါ် Mobile App ကိုသင် download ဆွဲပြီးပြီလား - iOS ကို, အန်းဒရွိုက်? ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြောင်းအရာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ရန်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သော်လည်းမူဘောင်မှာရှိနေပြီး၊ Bluebridge မှအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောမိုဘိုင်း app building platform!
ဖြစ်နိုင်ခြေတွေအတွက်ငါတို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားနေကြတယ်။ ငါတို့မှာရှိပြီးသား စျေးကွက်ရှာဖွေရေး podcasts တွေကို နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ MarketingClips များ စီးရီးလည်းလျှောက်လွှာ populating! ကျွန်ုပ်တို့ကဖြစ်ရပ်များကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနေပြီး push အသိပေးချက်များကိုပင်ပေးပို့နိုင်သည်။
ဘာကြောင့်ဒီလောက်အရေးကြီးရတာလဲ။ ကောင်းပြီ၊ ဒီမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်း ၁၄ ခုမှကြည့်ပါ Kahunaမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်ပလက်ဖောင်း
အမေရိကန်လူမျိုး ၄၄ ရာခိုင်နှုန်းကမိုဘိုင်းပစ္စည်းမပါပဲတစ်နေ့လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောကြတယ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင်မိုဘိုင်းအသုံးပြုသူ ၅.၂ ဘီလီယံရှိလိမ့်မည်
Apple App Store မှစက္ကန့်တိုင်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းပေါင်း ၈၅၀ ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်သည်
အီးမေးလ်ကလစ်အားလုံး၏ ၄၅% သည်မိုဘိုင်းဖုန်းပေါ်တွင်ဖြစ်သည်
စမတ်ဖုန်းသုံးစွဲသူများသည်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှအက်ပလီကေးရှင်း ၂၆.၇ ကိုရယူနိုင်သည်
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများတိုးချဲ့မှုသည် ၃၄၅% YoY တိုးခဲ့သည်
အနှစ်တစ်ထောင်ဆယ်ကျော်သက်များသည်မိုဘိုင်းအက်ပ်များတွင်တစ်နေ့လျှင် ၆.၃ နာရီသုံးစွဲသည်
အနှစ်တစ်ထောင်၏ ၅၀% သည်မိုဘိုင်းစျေးဝယ်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခဲ့ကြသည်
တစ်နေ့လျှင်အကြိမ် ၆၀ ကျော်အက်ပလီကေးရှင်းများစတင်သောမိုဘိုင်းစွဲသူများ၏ ၅၉% တိုးတက်မှု
မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများတွင်အမေရိကန်အရွယ်ရောက်သူများ ၁၈-၂၄ တွင်တစ်လလျှင်ပျမ်းမျှ ၉၁ နာရီသုံးစွဲသည်
ပထမ ၆ လအတွင်းအက်ပလီကေးရှင်းများသည်သူတို့၏သက်တမ်းတစ်ဝက်ကိုအသုံးပြုသည်
Starbucks သို့ပေးခဲ့သောအမေရိကန်ငွေအားလုံး၏ ၂၀% သည်မိုဘိုင်းမှတစ်ဆင့်ရရှိသည်
ပျမ်းမျှ Push Opt-In နှုန်းများ: iOS သည် ၅၁%၊ Android က ၈၆%
push အသိပေးချက်များသို့ရွေးချယ်သူများ၏ပျမ်းမျှ retention နှုန်းသည် ၂x ရှိသည်
မိုဘိုင်းလောကကမ္ဘာကြီးကိုပြောင်းလဲပစ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ စျေးဝယ်ခြင်း၊ သတင်း၊ မီဒီယာ၊ ကြော်ငြာ၊ ဒီ infographic သည်မိုဘိုင်းကိုမှန်ကန်သောနည်းလမ်းဖြင့်ကိုင်တွယ်သောစမတ်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်မည်မျှကြီးမားသည့်အခွင့်အလမ်းကိုပုံဖော်လိမ့်မည်။
Tags: မိုဘိုင်းအပေါ်အီးမေးလ်ကလစ် - မှတဆင့်မှုနှုန်းတစ်လကို application ဘယ်နှစ်လုံးရှိသလဲမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူမည်မျှရှိသည်ထောင်စုနှစ်မိုဘိုင်း app ကိုအသုံးပြုခြင်းမိုဘိုင်း device ကိုမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးစာရင်းဇယားမိုဘိုင်းစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအသုံးပြုမှုမိုဘိုင်း push သတိပေးချက်များpush သတိပေးချက် retention ကိုအသိပေးချက်များကိုတွန်းစမတ်ဖုန်းStarbucks